Somali Key SUS Ereyada Furaha ee Mawduuca Xejinta Waxqabadka
Ereyada Furaha ee Mawduuca
Waxaa tarjumay Sahir Jama
Kelmedda "xejin" waa muhiim xagga caawinta horumar. (Ereygan lagama helo qaamuusyada badankooda). Kelmeddu waxay qeexeysaa "kartida" wax lagu sii "adkeyn" karo (ambo-qaadis) kaddib marka taageero dibadeed laga joojiyo. Bulshada dhisata il biyood (sida ceel iwm), xejin waa hanashada ama gacan-ku-heynta dayactirka, nadiifinta iyo isticmaalka mishiinka biyaha soo saara marka la dhiso kaddib.
Deeq-bixiye dibadeed, xejin macnaheedu waa sii socodsiinta mashruuca ama wax soo saarkiisa, kaddib markay caawimadu joogsato. Adigana, bulsho-kiciye ama isuduwe, xejin waxay ku saabsan tahay sii waddidda xoojinta beesha xagga hor-u-socodka bulshonnimo. Dhinaca deegaan-dhowre iyo xidhiidh-dhowre, xejin waxay u baahan tahay in waxqabadkii bey'adda jirtaa ay sii adkeyn karto (nolol ahaan) si aan loo madhin kheyraadka dabiiciga ah ee aan la soo cusbooneysiin karin.